‘धन्दावालहरुले नै वाम राजनीति चलाएका रहेछन्’ — OnlineDabali
म प्रकाश हुँ कि, अन्धकार ! को हुँ भनेर कहिलेकहीँ आफैँलाई चिमोटछु । मेरो तनले जिस्क्याउँछ । मनले सहन्न । जुन आर्दशको धरातलमा मेरो धरहरा उभिएको थियो, त्यसलाई म स्वयम ढाल्दै छु । मिस्टर योद्धाहरु सामु मैले साक्षी किनारामा ल्याप्चे ठोकेकै हुँ ।
कुनैबेला जनयुद्धलाई सामाजिक फासीवाद भनेको रहिछु.। त्यसैलाई नजिर बनाउँदै एउटा तिघ्रे पनि आएर ‘भाग खोस्न आएको’ भनेर हकार्छ । यिनीहरुलाई के थाहा ? ग्यास च्याम्बर बनेको जनयुद्धको भट्टीबाट शान्तिको शास फेराउन मैले लगाएको गुन यिनीनहरुले कहिले सम्झेलान् ! यो कुटनीतिक अभ्यास र जोखिमको इतिहास कसले लेखिदेला ! त्योबेला कम्ता बुद्दि खपत गर्नु पर्यो ! अहिले लाग्छ–म अनैतिकताकोे भारी बोकी रहेको छु ।
आफैँलाई ढाँट्न कसले पो सक्छर ! म स्टेरिङ चलाउने ठाउँमा छु की तामेल गर्ने थलोमा बुभ्mनै सक्दिन् । अँध्यारो मनभित्र टिलपिल टिलपिल गर्ने प्रकाशले मलाई यस्ता प्रश्न सोधी रहन्छ । दिनको चैन र रातको निन्द्रा हराम गरेको छ । यदी एकता भइगयो भने मेरो हैसियत के कसो होला ! नत्र भन्नेको दाउ त्यो भव सागरमा चल्नेवाला छैन् नै ।
‘नत्र…’ भन्ने ठाउँ यहाँ पनि अब रहेन । सदा मन, मस्तिक, चिन्तन, तर्कगर्ने वौद्धिक एसाल्ट सार्की जेठो पनि –तँ एउटा बिष्ट बाहेक केही पनि रहेनछस्’ इस् भन्दै बाटो लाग्यो । कहिलेसम्म एउटा प्रतिभा, चेतना, सोँचलाई बाँधी राख्न सक्थेँ !… आखिर पढे लेखेको मुर्खै ठहरियो …ज्यादै बैगुनी रहेछ …. आखिर सार्की न पर्‍यो ।
सबै स्वार्थी जमात, बिहानदेखी बेलुकीसम्म भेट्न पर्धानेहरु सबै आसेपासे, धुन्दुकारी, स्वार्थी लोेभीपापी र फटाहा मात्र देख्छु । त्यस्ता कुकुरहरुलाई पनि प्रभु …हजुर त महान् आर्दशवादी क्रान्तिकारी भन्नु परेको छ । मैले खाने गाँसमा तिनीहरुकै अंश देख्छु । आत्मिक सेन्सरले मान्छे अति कमजोर हुँनेरहेछ, थाहा पाएको मनका औडाहा पनि भन्न नसक्ने । अब सहन्न…मन न हो ….मान्दैन् । हृदयका कुरा बोल्न कहिलेकही हौँस्याउँछ– लौ त जे नाप्ला नाप्ला भनेर ठोकिदिएँ…. धन्दावालहरुले नै बाम राजनीति चलाएका रहेछन् ।
काठमाडौंमा हिउँ पर्‍यो, हेर्नेको घुइँचो (भिडियोसहित)
जडीबुटी संकलन गर्न प्रतिबन्ध, स्थानीय व्यापारीकै मिलेमतोमा चोरी-निकासी बढ्यो